शशांकलेे नेतृत्व परिर्वतन माग्दा देउवाले भने-म थाकेकै छैन – DailyHamroNews
Complete News Here
शशांकलेे नेतृत्व परिर्वतन माग्दा देउवाले भने-म थाकेकै छैन
२०७५ भदौ २९ गते १९:१० मा प्रकाशित
२९ भदौ, काठमाडौं । नेेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले घुमाउरो शैलीमा पार्टी नेतृत्व छाड्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन् । तर, देउवाले उनको आग्रहलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाले गुट उपगुट अन्त्य हुनुपर्ने बताए । आगामी चुनावमा पार्टीलाई विजयी गराउन कांग्रेस नेताहरु एक हुनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘पार्टी एक बनाउन महामन्त्रीका हैसियतले मैले जेजे गर्नुपर्ने हो, भन्नुपर्ने हो म तयार छु ।’
कर्‍याङकुरुङ चराको कथा सुनाउँदै उनले एकवद्ध भएर १० हजार किलोमिटर उडेर आउने बताए । कांग्रेस पनि एकतावद्ध भएर उड्नुपर्ने भन्दै कोइरालाले भने, ‘जुन हाँसले नेतृत्व गरेको हुन्छ, त्यसका लागि शतप्रतिशत भार बोक्नुपर्छ ।’
‘१० हजार किलोमिटर एउटै नेतृत्वमा जाँदैन । नेतृत्व परिर्वतन गरिरहेको हुन्छ । थाक्छ, पछाडि जान्छ’ भन्दै उनले घुमाउरो शैलीमा सभापतिलाई नेतृत्व छाड्न आग्रह गरेका उनले हाँस्दै भने, ‘मैले भन्नुपर्ने कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नुभएको छ ।’
तर, सभापति देउवाले त्यही मञ्चबाट नेतृत्व छाड्ने प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । ‘म थाकेकै छैन कहाँ पालोपालो गर्नू’ देउवाले भने, ‘कर्‍याङकुरुङ थाकेको होला, म थाकेको छैन ।’ देउवाले यसो भन्दा सहभागीहरुमाझ हाँसोको फोहोरा छुट्यो ।
देउवाले पार्टीमा अन्तरघातीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । कांग्रेसलाई कांग्रेसले नै हराएको भन्दै भने, ‘अनुशासन समिति बनाउँ भन्दा समस्या हुन्छ । अनुशासन नभई पार्टी चल्छ ? त्यसैले बदमासी गर्नेहरुलाई कारबाही गरौं ।’
Previous कीर्तिपुरमा इटालियन नागरिकको ४ हजार युरो लुटियो
Next नारायणी अस्पताललाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण
Please like our official facebook page
Daily Hamro News
केन्याको बारमा पक्राउ परे १२ नेपाली महिला
आईपीएल : रासिदभन्दा सन्दीप अघि ! आज दिल्ली र हैदरावाद भिड्दै
नयाँ वर्षमा प्रधानमन्त्रीको भाषण : नन्दी भृंगी भेला भएर आन्दोलन गर्छौं भनेछन्
लुकाएर लुक्ने कुरा छैन, वृद्धभत्ता बढ्छ : प्रधानमन्त्री
बहस : किन बन्यो सिंगापुर ? किन बनेन नेपाल ? लि क्वान युको किताब ‘फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फष्ट’ पढेपछि